Fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra antsika | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Betsaka ny Kristiana tsy dia tena mahazo antoka sy manahy momba izany, nefa mbola tia azy ireo ve Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Mahatsapa alahelo ny tsy fahombiazany, ny fahadisoany, ny tsy fahombiazana - ny fahotany. Nampianarina izy ireo fa ny fitiavan'Andriamanitra ary ny famonjena aza dia miankina amin'ny hoe mankatoa an'Andriamanitra izy ireo. Noho izany dia manambara hatrany ny alahelon'Andriamanitra izy ireo ary mangataka famelan-keloka, manantena fa hamela ny helok'izy ireo Andriamanitra ary tsy hivily raha tsy miteraka fihetseham-po lalina.
Mampahatsiahy ahy an'i Hamlet izany, lalao nataon'i Shakespeare. Tamin'ity tantara ity dia nianatra ny printsy Hamlet fa namono ny rain'i Hamlet i Klaudius ary nanambady ny reniny haka ny seza fiandrianana. Noho izany, mikasa mangingina hamono ny dadatoany / dadabenany i Hamlet amin'ny fiheverana valifaty. Nipoitra ny fotoana tonga lafatra, saingy nivavaka ny mpanjaka, noho izany dia nahemotry ny fanafihana i Hamlet. Raha mamono azy aho mandritra ny fiaiken-keliny, dia ho any an-danitra, hoy i Hamlet. Raha miandry aho ka hamono azy rehefa nanota indray, nefa alohan'ny hahafantarany izany dia handeha any amin'ny helo izy. Betsaka ny olona no mizara ny hevitr'i Hamlet momba an'Andriamanitra sy ny fahotan'olombelona.
Rehefa nino izy ireo dia nolazaina fa raha raha tsy mibebaka sy mino izy ireo dia hisaraka tanteraka amin'Andriamanitra ary tsy afaka miasa ho azy ireo ny ran'i Kristy. Ny finoana an'io hadisoana io dia nahatonga azy ireo hanao fahadisoana hafa: isaky ny mianjera amin'ny ota izy ireo, dia esorin'Andriamanitra amin'ny fahasoavany izy ireo ary tsy hanarona azy ireo intsony ny ran'i Kristy. Izany no antony, rehefa manao ny marina ny fahotany ny olona dia manontany tena mandritra ny androm-piainany kristianina na dia nandà azy ireo ve Andriamanitra. Tsy misy amin'ireo vaovao tsara ireo. Fa ny filazantsara dia vaovao mahafaly. Tsy milaza amintsika ny filazantsara fa tafasaraka amin'Andriamanitra isika ary mila manao zavatra mba hahafahan'Andriamanitra manome antsika ny fahasoavany. Ny filazantsara dia milaza amintsika fa Andriamanitra Ray ao amin'i Kristy ny zavatra rehetra, ao anatin'izany ianao sy ianao, ary ny olona rehetra (Kolosiana 1,19: 20) nihavana.
Tsy misy ny sakantsakana, tsy misy fisarahana eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra, satria io no nandrovan'i Jesosy azy ary satria ny tenany dia nanintona ny olombelona ho amin'ny fitiavan'ny Ray (1 Jaona 2,1; Jaona 12,32). Ny hany sakana dia an-tsaina (Kolosiana 1,21) fa isika olombelona dia nanangana tamin'ny alalan'ny fitiavan-tena, ny tahotra sy ny fahaleovantena. Ny filazantsara dia tsy momba ny fanaovana na mino zavatra iray izay mahatonga an Andriamanitra hanova ny toetrantsika tsy tiana ka tiana.
Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny zavatra ataontsika na tsy ataontsika. Ny filazantsara dia fanazavana ny efa marina - fanazavana iray momba ny fitiavana feno fitiavana ny ray amin'ny zanak'olombelona rehetra izay nambara tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny Fanahy Masina. Tian'Andriamanitra talohan'ny nanenenanareo na nino na inona na inona, ary tsy hisy hanova izany na ny nataonao (Romana 5,8; 8,31-39).
Tsy misy afa-tsy Jesosy, Mpanavotra antsika, izay nanaiky ny fahotantsika rehetra, ary amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina no miasa ao anatintsika sy hanatanterahany araka ny sitrapony (Filipiana 4,13:2,8; Efesiana 10). Afaka manolotra ny tenantsika amin'ny fo manontolo hanaraka azy isika, fantatsika fa raha tsy mahomby isika dia hamela ny helokay. Saintsaino izany! Andriamanitra tsy andriamanitra mijery antsika lavitra any, fa ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina izay itoeranao sy ny olon-kafa rehetra, (Asan’ny Apostoly 17,28). Tena tia anao be izy, na manao ahoana na manao ahoana ianao na izay nataonao, fa ao amin'i Kristy, Zanak'Andriamanitra, izay tonga nofo araka ny nofo - ary tonga ao amin'ny nofontsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina - ny fahatahoranao sy ny tahotrao, Nesorina ny fahotanao ary nositraninao tamin'ny fahasoavany famonjena. Nesoriny avokoa ny sakana rehetra teo aminao.